खानपान | Ratopati
दिउँसो दुई बजेपछि फलफूल खानु हुँदैन ? कतिबेला खाँदा बढी फाइदा access_timeअसार १२, २०७९
हरेक दिन फलफूल खाँदा शरीर स्वस्थ रहन्छ । फल शरीरका लागि निकै लाभदायी हुन्छ र यसले शरीरलाई गम्भीर रोगबाट पनि बचाउँछ त्यसैले फललाई पोषक तत्वको पावरहाउससमेत भनिन्छ । विशेषज्ञले हरेक व्यक्तिलाई फलको सेवन गर्न सल्लाह दिन्छन् । धेरैजसो मानिस बिहानको ब्रेकफास्टमा फल खान्छन्, कत...
जीवनशैली: पोषणको महत्त्व (भाग–१) access_timeअसार १२, २०७९
बढ्दो मोटोपनको कारणले संसारभर ज्यान गुमाउने या दीर्घ रोगले पीडित हुने क्रम जारी छ । स्वस्थ्यकर जीवनशैलीको चार मुख्य बाधकहरू धूमपान, मदिरा, प्रशोधित कार्बोहाइड्रेट तथा जनावरबाट पाइने खानाको धेरै उपभोग हो । पोषणको विषयमा धेरै अध्ययन तथा अनुसन्धान भएका छन् । ७० प्रति...
युरिक एसिड कम गर्ने घरेलु उपाय access_timeअसार ११, २०७९
आजकल बदलिँदो जीवनशैली र खानपानका कारण धेरैजसो मानिस युरिक एसिडको समस्याको सिकार भइरहेका छन् । शरीरमा युरिक एसिडको मात्रा बढेपछि मानिसहरूले धेरै समस्याको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने शरीरमा युरिक एसिडको मात्रा बढेपछि सुन्निने र जोर्नी दुख्ने जस्ता समस्याहरू सुरु ...
तौल कम गर्न रिभर्स डाइटिङ फाइदाजनक : के हो, कसरी गर्ने ? access_timeअसार ५, २०७९
हामी सबै फिट हुन चाहन्छौँ, शरीरलाई सुगठित पनि बनाउन चाहन्छौँ । यसका लागि तौल नियन्त्रणमा राख्नु अति आवश्यक छ । शरीरको तौल नियन्त्रणमा राख्न वा मोटोपना कम गर्न मानिसहरु विभिन्न किसिमका व्यायाम र खानपानको अनुशासन पालना गर्छन् । यसले केही समयको लागि निकै राम्रो नतिजा पन...
मुड ताजा राख्न खानुहोस् यस्ता सुपरफुड, तौल पनि बढ्दैन access_timeजेठ ३०, २०७९
अफिसको काम, घरायसी जिम्मेवारी, घरपरिवारमा कुनै समस्या, आर्थिक अभाव । दिनभरी के–के तनावबाट तनावबाट गुज्रनुपर्छ, त्यो थाहा हुँदैन । तपाईंलाई असाध्यै धेरै थकाई लागेको पनि हुनसक्छ । यसो हुँदा स–सानो कुरामा तपाईंलाई रिससमेत उठ्ला, इरिटेशन पनि होला । यसैब...
मोटोपनको शल्यक्रिया गरेका व्यक्तिमा क्यान्सरको जोखिम उच्च access_timeजेठ २६, २०७९
विज्ञहरुका अनुसार मोटोपन क्यान्सरको उच्च जोखिमसँग सम्बन्धित छ । तर, तौल घटाउने शल्यक्रियाले क्यान्सरको जोखिम कम गर्ने एउटा नयाँ अध्ययनले देखाएको छ । अमेरिकन सोसाइटी फर मेटाबोलिक एन्ड बेरियाट्रिक सर्जरीको वार्षिक बैठकमा प्रस्तुत गरिएको अनुसन्धान अनुसार तौल घटाउने शल्यक्रिया...
बालबालिकालाई स्वस्थ राख्न यी सुपरफुड आहारमा समावेश गर्नुहोस् access_timeजेठ २४, २०७९
आजको बदलिँदो जीवनशैलीमा बालबालिकाको स्वास्थ्यको ख्याल गर्नु निकै जरुरी छ । आजको समयमा बालबालिकालाई स्वस्थकर खानाभन्दा जङ्कफुड खान मनपर्छ । तर यस्ता जङ्कफुडले बालबालिकाको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पारिरहेको हुन्छ । जसले गर्दा बालबालिकाको शारीरिक र मानसिक विकासमा प्रतिकूल ...
यी पाँच चिजसँग बिर्सेर पनि नखानुहोस् दुध, स्वास्थ्यका लागि खतरनाक access_timeजेठ १८, २०७९
जून १ मा विश्व दुध दिवस मनाइन्छ । दुधमा हरेक प्रकारको पोषक तत्व पाइन्छ र यो स्वास्थ्यका लागि निकै आवश्यक पनि छ । दुधका फाइदाप्रति मानिसलाई जागरुक गराउनका लागि विश्व दुध दिवस मनाइन्छ । दुधलाई मानिसहरुले आ–आफ्नै तरिकाले पिउने गर्छन् । कसैलाई साधा दुध पिउन मनपर्छ भ...
जिरा सानो, फाइदा ठूलो access_timeजेठ १७, २०७९
जिराको सेवन सामान्यतया खानाको स्वाद बढाउनका लागि गरिन्छ, तर के तपाईंलाई थाहा छ यसको सेवनले पेट दुख्ने, पेटमा ग्यास हुने, अपच हुने जस्ता स्वास्थ्यसम्बन्धी धेरै समस्याहरू हटाउँछ । तपाईं जिरालाई मसलाको रूपमा मात्र होइन यसलाई काँचो पनि खान सक्नुहुन्छ, वा यसको पानी प...
घ्यु हो पावर हाउस : महिनावारीको दुखाईबाट राहत, लामो–नरम कपाल र कोमल गुलाबी ओठ पाइने access_timeजेठ ११, २०७९
शुद्ध घ्यू सबै मिनरल्स र भिटामिनको पावरहाउस हो । आयुर्वेदमा घ्यूलाई रसायन भनिन्छ । यो शरीरको हरेक भागका लागि फाइदाजनक छ । यसको फाइदाबारे भारतका आयुर्वेदाचार्य पियुष जुनेजाले एक भारतीय सञ्चार माध्यमसँगको कुराकानीमा बताएका छन् । कपाल सुन्दर हुनेः घ्युमा भिटामिन...
घ्यू र मिश्री एकैपटक खाँदा शरीरलाई मिल्छ यी ६ फाइदा, खाने तरिका कस्तो ? access_timeबैशाख २१, २०७९
गुणस्तरीय घ्यू र मिस्री एकैपटक खाँदा शरीरलाई थुप्रै फाइदा मिल्छ । मानिसले खाना खाएपछि मिस्री र सौफ त खान्छन् तर तपाईंले कहिल्यै घ्यूसँग मिस्री खानुभएको छ ? घ्यू स्वास्थ्यका लागि निकै फाइदाजनक हुन्छन् । घ्यूमा पाइने गुण र पोषक तत्व शरीरका थुप्रै रोगबाट रक्षा पनि ग...
कहिले र कसका लागि खतरनाक हुनसक्छ मह ? बिर्सेर पनि नगर्नुहोस् यी गल्ती access_timeबैशाख १८, २०७९
महको स्वाद मात्रै मिठो होइन, यो स्वास्थ्यका लागि पनि निकै फाइदाजनक मानिन्छ । महको सेवनले शरीरलाई विभिन्न खालका फाइदा दिन्छ । यसमा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, भिटामिन ए, बी, सी, आयरन, म्याग्नेसियम, क्याल्सियम, फस्फोरस, पोटासियम, सोडियम आदि पोषक तत्व पाइन्छन् । मह स्...
दुनाटपरीको स्वादिष्ट परिकार : ‘किङ्ग्स चिकेन’ access_timeबैशाख १७, २०७९
रातोपाटीको खानाबार सेग्मेन्टमा आज हाम्रो टीम पुगेको छ, काठमाडौँको अनामनगर स्थित रहेको दुना टपरी रेस्टुरेन्ट । नेपाली ग्रामीण कल्चर दुना र टपरीमा खाना सर्व गरेर पाहुनाको मन जित्दै अघि बढिरहेको रेस्टुरेन्ट हो, दुना टपरी । नेपालमै उत्पादन भएको दुना टपरीमा नेप...
के गर्मीमा काँचो लसुन खान मिल्छ ? के भन्छ आयुर्वेद ? access_timeबैशाख १४, २०७९
लसुनन हाम्रो भान्साको एउटा महत्वपूर्ण हिस्सा हो । खानालाई स्वादिलो बनाउन होस् वा स्वस्थवद्र्धक लसुनको प्रयोग गर्ने गरिन्छ । थुप्रै स्वास्थ्य विज्ञले पकाएको लसुनभन्दा काँचो लसुन थुप्रै गुणा बढी फाइदाजनक हुने बताउँछन् । यस्तै, हाम्रा घरका पाका सदस्यले पनि खाली पेटमा का...
मधुमेहका बिरामीले बिहान गर्नुहोस् यो एक काम, ब्लड सुगर नियन्त्रणमा रहने access_timeबैशाख १३, २०७९
गर्मीको मौसम चलिरहेको छ र यो मौसममा मानिस यस्तो चिज खान रुचाउँछन् जसमा पानीको भरपुर मात्रा र शरीरका लागि आवश्यक पोषक तत्व समावेश होस् । गर्मीको मौसममा पाइने भिन्डीमा पनि यस्तै गुणकारी तत्व पाइन्छन् । भिन्डीको पानी पनि हाम्रो शरीरका लागि निकै फाइदाजनक मानिन्छ...
दिनमा आखिर तपाईंले कतिपटक खाना खाने, तीनपटक वा मात्र एकपटक ? access_timeबैशाख १२, २०७९
साधारणतया हामी एक दिनमा तीन पटक खाना खान्छौँ – जीवनको नयाँ तरिकाले खाना खाने यो ढाँचामा काम गर्दछ । हामीलाई बिहानको नास्ता दिनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण खाना हो भनेर सिकाइएको छ । कार्यालयमा खाना खानका लागि हामीलाई कामबाट ब्रेक दिइन्छ । त्यसपछि हाम्रो ...
खाने हैन त मीठो मटन सेकुवा ? (भिडियो) access_timeबैशाख ९, २०७९
कालीमाटी चोकबाट करिब ५ सय मिटर पश्चिममा छ, ‘कालीमाटी सेकुवा एण्ड फेमिली रेष्टुरेन्ट’ । करिब १२ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको यो रेष्टुरेन्टलाई सम्हालिरहेका छन् अर्घाखाँचीका रामप्रसाद पोखरेल । थुप्रै व्यावसायमा संलग्न रहेका पोखरेल अधिकांश समय यही सेकुवा कर्नरमै ...
नयाँ वर्षको खान्की : दृश्य लाउन्जको ग्रिल्ड साल्मनको रेसिपी (भिडियोसहित) access_timeबैशाख १, २०७९
तपाईं खानाको पारखी हुनुहुन्छ भने तपाइका लागि एउटा गन्तव्य हुनसक्छ, दृश्य लाउन्ज । नयाँ बानेश्वर स्थित आइप्लेक्स मलको सातौँ तलामा रहेको दृश्य लाउन्ज जहाँँ विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशी खानाका परिकारको स्वाद लिँदै उपत्यकाको मनोरम दृश्यसँग रमाउन सकिन्छ । विशेष गरेर &...
१२२ वर्ष बाँचेकी महिलाले यी ३ कुरा नियमित खाने गर्थिन् access_timeचैत २८, २०७८
युके स्थित सिबिडी कम्पनी इडन गेटले संसारको सबैभन्दा उमेरदार व्यक्तिमाथि अध्ययन गरेर उनीहरुको लामो जीवनको राज पत्ता लगाएको छ । उनीहरुको स्वास्थ्य र लामो उमेरको राज जान्नका लागि अनुसन्धानकर्ताले सयभन्दा बढी बाँचेका ६ जना व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गरे । उनीहरुले स्वस्...
यी ७ चिजमा हुन्छ दुधभन्दा पनि बढी क्याल्सियम, हड्डी बलियो हुने access_timeचैत २७, २०७८
बच्चाबेलादेखि नै हामीलाई सधैँ दुध खान सल्लाह दिइन्थ्यो । दुधले शरीरको क्याल्सियमको कमी पुरा गर्छ भने यसले हड्डी पनि बलियो बनाउँछ । दुध पक्कै पनि स्वस्थ हुन्छ । तर यसलाई क्याल्सियमको सबैभन्दा राम्रो स्रोत भन्नु गलत हुनेछ । २५० एमएलको गिलासमा करिब ३०० मिलिग्राम क्...
गर्मीमा कुन ड्राइ फ्रुट्सलाई भिजाएर खाने, कसलाई नखाने ? access_timeचैत २१, २०७८
ड्राइ फ्रुट्स छाला, मुटु र दिमागका लागि निकै फाइदाजनक हुन्छन् तर गर्मीको मौसममा यी कम खान सल्लाह दिइन्छ । ड्राइ फ्रुट्स गर्मी बढाउने खालका हुन्छन् त्यसैले विशेषज्ञले गर्मीमा यसलाई भिजाएर खान सल्लाह दिन्छन् । मानिसहरु धेरैजसो गर्मीमा बदाम र ओखरजस्ता ड्राइ फ्रुट्सला...
बेसारले क्यान्सरको उपचार, के सम्भव छ ? access_timeचैत १८, २०७८
नेपालसमेत सबै दक्षिणी एशियाली देशको भान्सामा बेसारको प्रयोग हुनेगर्छ । तर के बेसार स्वादका लागि मात्रै प्रयोग हुन्छन् ? वा यसले हाम्रो स्वास्थ्यलाई राम्रो बनाउनेदेखि लिएर हामीलाई क्यान्सरसबाट जोगाउन सक्छ त ? तपाईंले यस्ता हज्जारौँ लेख पाउनुहुनेछ, जसमा बेसारल...
पातलो कम्मर चाहिएको छ ? यी १० खानेकुराको सम्मिश्रणले तीब्र रुपमा घट्छ बोसो access_timeचैत ११, २०७८
तौल घटाउनका लागि मानिस घण्टौँ जिममा पसिना बगाउँछन् । सप्लिमेन्ट्स र फ्याट बर्नरजस्ता चिजमा पैसा बर्बाद गर्छन् । यसका भयंकर साइड इफेक्ट्स पनि हुनसक्छन् । जबकी न्यूट्रिशनिस्टले पछिल्लो समय तीब्र रुपमा तौल घटाउने प्राकृतिक तरिकाबारे जानकारी दिन्छन् । विशेषज्ञले यस्तै प्र...
‘ट्रान्स फ्याट’युक्त खानेकुरा स्वास्थ्यका लागि कति घातक ? access_timeफागुन ३०, २०७८
तपाईं हामीले ‘ट्रान्स फ्याट’ धेरै कम सुन्दै आएको शब्द हो । ट्रान्स फ्याट स्वास्थ्यका दृष्टिले चिल्लो पदार्थ मध्येको सबैभन्दा हानिकारक चिल्लो पदार्थ हो । नेपालमा न्यून तथा मध्यम आय भएका परिवारका लागि ट्रान्स फ्याट चुनौती बन्दै गएको वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा.प्रेमराज ...